Mayday, Mayday nemaSeneta ese eUS uye Vamiriri muHawaii vakatumirwa kuNavy
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Mayday, Mayday nemaSeneta ese eUS uye Vamiriri muHawaii vakatumirwa kuNavy
Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • USA Kuputsa Nhau
Nepo vatungamiriri venyika vachisangana muGlasgow, UK kuCOP26 kuti vakurukure nezvezvakatipoteredza uye kushanduka kwemamiriro ekunze, njodzi inoenderera mberi muHawaii inotsamira pakushanya iri kubuda uye yava nyaya huru yenyika.
Muna Ndira gore rino, vakuru veNavy vaive nehumbowo hwakakwana hwekusimbisa pombi yakabatana neRed Hill Bulk Fuel Storage Facility system yaiburitsa mafuta muPearl Harbor pedyo neHotera Pier. Nekudaro, Dhipatimendi rehutano harina kuziviswa kusvika Chivabvu, maererano netsamba yeDOH.
Izvi zviri kushanduka kuita njodzi huru yezvakatipoteredza muHawaii.
Nezuro vese vamiriri ve4 US uye maseneta eHurumende yeHawaii vakanyora tsamba iyi kuDhipatimendi reNavy.
Ichi ndicho chinyorwa chekutanga chetsamba:
Wadiwa Secretary Del Toro,
Isu tinonyora nekuwedzera kunetseka nezve kuchengetedzeka kweNavy mashandiro emafuta muHawaii. Isu tiri kunyanya kunetseka nezve mishumo yekudonha kwemafuta padyo neHotera Pier paJoint Base Pearl Harbor-Hickam (JBPHH) yakaitika muna Kurume 2020 uye fungidziro yekuti Navy yanga isiri kuuya nenzira kwayo nezvekwakabva uye kukura kwekudonha kwemafuta nevatongi vehurumende, vakuru vakuru vehurumende, uye voruzhinji—kusanganisira mahofisi edu.
Mauto eNavy akaita chitsidzo chekubatanidza vanhu veHawaii kuburikidza nehoro dzemutaundi nemabhodhi evavakidzani, kupfupisa vatongi vehurumende nevakuru vakuru, uye kuchengetedza mitsetse yenhaurirano yakavhurika neboka reHawaii reCongress pamusoro pezviri kuitwa neNavy kuti varambe vari vatariri vakanaka vezvakatipoteredza. . Ndosaka takaodzwa mwoyo kuti takatanga kudzidza nezveHotera Pier mafuta anodonha mumapepanhau pane kunzwa kubva kuhutungamiriri hweNavy zvakananga.
Sarudzo yeNavy yekusabvuma pachena kuti Hotel Pier yadeuka uye kutsanangura zvairi kuita kudzivirira kubuda kweramangwana hazvienderane nekuzvipira kwakaitwa nevanyori veNavy kuvanhu veHawaii kuti varambe vakajeka pazvinhu zvese zvinogona kukanganisa zvakatipoteredza. zviwanikwa. Kupfuurirazve, zvinotevera kudonha kwemafuta muna Chivabvu 6 paRed Hill Bulk Fuel Storage Facility umo Navy pakutanga yakaudza veruzhinji kuti hapana mafuta akaburitswa mumhepo, chirevo chatakadzidza kuti hachina chokwadi kana Navy yawana huwandu hwakazara spill. Zviitiko izvi zvichangoburwa, kusanganisira mapinduriro akaitwa neNavy uye kusabuda pachena kune veruzhinji, zvinomutsa mibvunzo nezve kukomba uko Navy inotora basa rayo rekutaurirana zvakajeka neveruzhinji nezve nyaya dzine chekuita nehutano nekuchengetedza. Vanhu veHawaii vanokodzera zvirinani kubva kuNavy.
Sezvinei nechiitiko cheHotera Pier, isu tine zvinotinetsa izvo zvinomutsa mubvunzo kuti Navy iri kushanda sei uye kutungamira mashandiro ayo emafuta muHawaii. Isu tiri kukumbira panguva uye yakakwana mhinduro dzemibvunzo inotevera:
1) Ndeapi maitiro akashandiswa nevakuru veNavy kuti vaone kwainobva uye chiyero cheHotera Pier inodonha uye maitiro aya akatevera kuchengetedzwa kweNavy uye miyero yekuyedza iyo yakamisa kuvandudza kuchengetedzwa kwemafuta ayo mukupindura kumwe kurasika?
2) Ko Navy yakatevedzera zvese zvayaida kuburitswa kwemafuta zvine chekuita nechiitiko ichi uye yakapa ruzivo rwenguva kune vamiriri vehurumende, kusanganisira ruzivo rungave rwakakosha kune Red Hill anoshanda mvumo anonzwa mukuru?
3) Ndeipi huwandu hwemafuta akaburitswa paHotera Pier uye chii chakaitwa neNavy kuchenesa nekugadzirisa nzvimbo yakakanganiswa?
4) Ndeupi humbowo, kana huripo, huripo hunoratidza kuti vakuru veNavy vakaramba ruzivo nezve Hotel Pier yekudonha iyo ingadai yakave yakakosha kuHawaii Dhipatimendi reHutano kuti rigadzirise mvumo yekushanda yeRed Hill?
5)Ndezvipi zvinotevera zviito zviri kuitwa neNavy kuti zvione zvimwe zvinogona kukanganisa mukushanda kwemafuta, kusanganisira mapaipi epaJBPHH kana kutenderedza, izvo zvinogona kukonzera kudonha kwemafuta kune njodzi? uye
6) Chii, kana chiripo, hukama hune pombi yeHotera Pier kuRed Hill Bulk Fuel Storage Facility uye izvi zvingave nemhedzisiro yei pachirongwa chiripo chekuvandudza nzvimbo, kusanganisira izvo zvinodikanwa nevatongi vehurumende nevemubatanidzwa?
Hondo yeNavy inofanira kuramba ichivandudza hutungamiri nekutarisa kwekushanda kwayo, uye kupa ruzivo rwakakodzera uye rwakarurama kune vatongi vehurumende uye vehurumende kuti vaone kuti mabasa ayo emafuta haaise njodzi kune hutano nekuchengeteka kwevanhu veHawaii. Kuti izvi zviitike, tinotarisira kuti muchapa mhinduro dzakakwana uye nenguva kumibvunzo yakatsanangurwa pamusoro, uye kana paine chakaipa chikafumurwa, muchazotora danho rakakodzera rekuzvidavirira.
Tinokumbira neruremekedzo musangano wevamiriri venhengo kuti tikurukure kuti Navy iri kushanda sei uye kuona mafambisirwo anoitwa mafuta ekufambisa dzimotokari muHawaii, kusanganisira matanho airi kutora kuti veruzhinji vave neutano nekuchengetedzeka, musi wa3 Zvita 2021 usati wapfuura. Ndatenda kufunga kwako kwechikumbiro ichi. Tinotarisira kuzokurukura nyaya iyi zvakare.
Tinotarisira kuzokurukura nyaya iyi zvakare.
MAZIE K. HIRONO, Senator yeUS
ED CASE, Mumiriri weUS
KAIALIʻI KAHELE, Mumiriri weUS